IVA 2T ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံးနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- IVA 2T
အမြိုးအစားခှဲခွားထားသောနရော: ရခေဲထုတျစကျ , ၂၀,၀၀၀ USD ဒေါ်လာအောက်
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: IVA2T
IVA2T 2ton Industrial Stainless Steel Ice-making machine was produced according to the most advanced technology of the United States in 2019.
IVA2T ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်) ကို US ရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ခေတ်အမီဆုံးနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
Video of the ice-making machine
Purified ice is frequently used in many countries, especially in suchatropical climate, like Vietnam. It is commonly used in public places such as restaurants, schools, restaurants, or supermarkets. With Viet An's IVA2T purified ice-making machine, the customers can be completely proactive in production, especially clean water. If you want to ensure 100% pure ice quality, you can invest inapure water filtration system.
ရေသန့်ရေခဲကို နိုင်ငံတော်တော်များများ အထူးသဖြင့် ဗီယက်နမ်လို အပူပိုင်းဒေသတွေမှာ အလွန်ပဲ အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ ၄င်းကို လူအများရှိတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ ကျောင်းတွေ၊ စူပါမားကပ်တွေမှာ ပိုပြီး အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ Viet An ရဲ့ IVA 2T ရေခဲထုတ်စက်ဖြင့် ဝယ်ယူသူတွေက ထုတ်လုပ်မှုပိုင်း အထူးသဖြင့် သန့်ရှင်းသောရေကို လုံးဝ ဖန်တီးလို့ ရနိုင်မှာပါ။ တကယ်လို့ သင်က ရေခဲကွာလတီကို ၁၀၀% သန့်စင်စေချင်တယ်ဆိုရင် ရေစစ်ထုတ်စနစ်ကိုလည်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
To know more details about price of tube ice making machines, ranging from mini machines to industrial machines, go to: https://vietan.vn/may-lam-da-vien
To protect consumers' health and enhance the food industry's reputation, the customers can trust Viet An's IVA2T 2ton Industrial Stainless Steel Ice-making machine. Withaperfect overall technical design, this product will surely satisfy any customer. To know more details about the product, please read the article below.
ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ပြီး အစားအသောက်စက်ရုံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကြီးမားလာစေဖို့ ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ Viet An ရဲ့ IVA 2T ၂ တန် စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်ကို ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံသော နည်းပညာဒီဇိုင်းကြောင့် ဒီပစ္စည်းက ဘယ်လိုဝယ်ယူသူကိုမဆို စိတ်ကျေနပ်မှု ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းအကြောင်း ပိုမိုသိရှိဖို့ အောက်က ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုပေးပါ။
IVA2T 2ton Industrial Stainless Steel Ice-making machine (100% New)
IVA2T ၂ တန် စက်ရုံသုံး စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀%အသစ်)
On the market, Viet An's 2ton ice-making machines are always offered at the highest price! Are you wondering why Viet An offers such high prices compared to other vendors? This article will help to resolve your question.
ဈေးကွက်မှာ Viet An ရဲ့ ၂ တန် ရေခဲထုတ်စက်က အမြဲတမ်း ဈေးအများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် Viet An က အခြားဈေးသည်တွေထက် ဈေးများပြီး ရောင်းချနေလဲဆိုတာ သင်သိချင်ပါသလား? ဒီဆောင်းပါးက သင့်ရဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်။
Why should you choose Viet An’s IVA2T 2ton Industrial Stainless Steel Ice-making machine?
Viet An ရဲ့ IVA 2T ၂ တန် စက်ရုံသုံး စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်ကို သင်ဘာကြောင့် ရွေးချယ်သင့်တာလဲ?
IVA2T 2ton Industrial Stainless Steel Ice-making machines are compactly designed according to American quality standards. The ice quality is ensured thanks to the closed production cycle. The operation performance is stable, meeting all the diverse demands of the customers.
IVA 2T ၂ တန် စက်ရုံသုံး စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်တွေကို အမေရိကန်ရဲ့ ကွာလတီစံချိန်စံနှုန်းများနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ သီးသန့် ထုတ်လုပ်ခြင်း စက်ဝိုင်းကြောင့် ရေခဲကွာလတီကိုလည်း သေချာစေပါတယ်။ လည်ပတ်မှု လုပ်ဆောင်ချက်က တည်ငြိမ်ပြီး ဝယ်ယူသူတွေအားလုံးရဲ့ အကြိုက်နဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
အရည်နှင့် အငွေ့ခွဲထုတ်ပေးသော စနစ်
With the application of the most advanced technology in 2019, this machine offers an ideal capacity of energy saving. The liquid and gas separation system is an improvement of Viet An. It applies the most advanced technology in 2019 and is only available in Viet An. It is used to facilitate the ice making process and prevent the compressor from being affected by the liquid, from which improving the machine shelf life. Also, thanks to this technology, the duct system is improved to be more compact and the ice making time is reduced.
၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံး အပလီကေးရှင်းကြောင့် စက်က အင်နာဂျီကို ချွေတာနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အရည်နှင့်အငွေ့ ခွဲထုတ်သောစက်က Viet An ရဲ့ တိုးတက်မှုတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်မှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပြီး Viet An မှာသာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို ရေခဲပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်လည်ပတ်ရန်၊ ဖိသိပ်စက်ကို အရည်ထိရောက်မှုမှ ကာကွယ်ပြီး သက်တမ်းရှည်စေရန် အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီနည်းပညာကြောင့် ပြွန်စနစ်ကို ပိုမိုသိပ်သည်းအောင် လုပ်နိုင်ပြီး ရေခဲထုတ်လုပ်တဲ့ အချိန်ကိုလည်း လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
Compressor (100% New)
Currently, only Viet An is applying the new compressor for ice making machines. Our compressors are produced according to the latest technology, bringing the highest durability. It is manufactured in an absolutely automatic CNC system with automatic cutting, pressing and molding processes. After that, it is transferred to the high pressure testing machine - the best high pressure testing machine imported from German. All our machines need to go throughastrict quality inspection system before using
ယခုအခါမှာ Viet An ကသာ ရေခဲထုတ်စက်တွေထဲမှာ ဖိသိပ်စက်အသစ်ကို အသုံးပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖိသိပ်စက်တွေကို နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ကြာရှည်အခံနိုင်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို အော်တို ဖြတ်တောက် ဖိသိပ် ပုံသွင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါတဲ့ လုံးဝ အော်တို CNC စနစ်နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ့နောက် ဂျာမန်မှ တင်သွင်းသော အကောင်းဆုံး ဖိအားမြင့်တိုင်းတာစက်ဆီကို ပို့ပေးရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စက်တွေ အကုန်လုံးက အသုံးမပြုခင် တင်းကြပ်သော ကွာလတီစစ်ဆေးမှု စနစ်ဆီကို ဖြတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Imported stop valve
တင်ပို့ထားသောာ ရပ်တန့် အဆို့
Unlike other ice making machine manufacturers, we use imported stop valves instead of processing valves for our IVA 0.6T 600Kg Industrial tube ice making machines.
အခြားရေခဲစက် ထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့ မတူတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ IVA 2T ၂ တန် စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်တွေမှာ စနစ်တကျ အဆို့တွေအစား တင်ပို့ထားသော ရပ်တန့်အဆို့တွေကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
Completely Built Up Cooling tower
အပြည့် တည်ဆောက်ထားသော အေးစေသော တာဝါ
The cooling tower is used to cool the system with water and fans. It reduces the temperature by separating the heat from the water and exhausting the hot steam. The cooling tower consists ofaframe and body,abuffer block, an air inlet unit,acold water tank,awater shield, andafan. Each part playsaspecific role in the ice making process.
အေးသော တာဝါကို ရေနဲ့ ပန်ကာတွေကို အသုံးပြုကာ စနစ်ကို အေးစေဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ ဒါက ရေမှ အပူကို ခွဲထုတ်ခြင်း၊ ရေငွေ့ထွက်အောင်လုပ်ခြင်းဖြင့် အပူချိန်ကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ အေးသောတာဝါမှာ ဖရိန်နဲ့ ကိုယ်ထည် တစ်ခု၊ ကြားခံတစ်ခု၊ လေစီးဝင်ယူနစ်တစ်ခု၊ ရေအေးတိုင်ပီတစ်ခု၊ ရေအကာတစ်ခု၊ ပန်ကာတစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုချင်းစီက ရေခဲပြုလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အရေးပါပါတယ်။
တင်ပို့ထားသော အခိုးကို အရည်ဖြစ်စေသည့် စက်
Imported Condenser (100% New) This is an important part in the ice making process. It has main function of condensing from gas to liquid. It is recommended to regularly clean the condenser, at least onceamonth to remove the limestone residue, otherwise, the heat exchange will be limited.
ဒါက ရေခဲထုတ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်က အငွေ့ကို အရည်အဖြစ် ပြောင်းလဲ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို တစ်လ တစ်ကြိမ် ပုံမှန်စစ်ဆေးပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ထုံးကျောက်အကြွင်းအကျန်တွေကို ဖယ်ထုတ်နိုင်မှာပါ။ ထိုသို့ မပြုလုပ်လျှင် အပူပြောင်းလဲမှုကို ကန့်သတ်ပါလိမ့်မယ်။
The electrical system of the 600kg industrial ice making machine is simply designed with only one on/off button,aprotection relay system, an automatic time relay system, etc. With this automatic electrical system, the machine will automatically make ice, discharge ice and stop in electrical incidents. Unlike the traditional block ice making machines where the operators need to manually work with the block ice, causing the bone diseases, with this automatic electrical system, the operators just involve in the final process of bringing the products to selling.
၁ တန် ရေခဲထုတ်စက်ရဲ့ လျှပ်စစ်စနစ်ကို ခလုတ် ၁ ခု၊ ကာကွယ်ပေးသော စနစ် ၁ ခု၊ အော်တိုအချိန် အစားထိုးစနစ် စတာတွေနဲ့ ရိုးရှင်းစွာ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ အရင်က လူအလုပ်များမှ ရေခဲအတုံးကြီးတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ စက်တွေနဲ့ မတူဘဲ ဒီ အော်တို လျှပ်စစ်စနစ်မှာ အော်ပရေတာက ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချဖို့ သယ်ယူရတဲ့ နောက်ဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်မှာသာ ပါဝင်ရပါတယ်။
Images of Viet An’s exclusive components
Viet An ၏ အထူးသီးသန့် အစိတ်အပိုင်းများ ပုံများ
To create our own brand equity, we have researched and designed the exclusive components used for our ice making machines.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ကို ဖန်တီးဖို့ ရေခဲထုတ်စက်အတွက် အစိတ်အပိုင်းတွေကို သုတေသနပြုလုပ်ပြီး ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။
IVA2T 2ton Industrial Stainless Steel Ice-making machines are produced at Quang Minh industrial park, Me Linh, Hanoi, according to 2019’s most advanced technology to reduce the ice-making time, save operation cost, and prevent the machines from unexpected incidents during operation. This is why Viet An’s products have higher prices than other products as they can contribute to stable operation and cost-saving, thereby enhancing the business competitiveness.
ဒီရေခဲထုတ်စက်ကို Quang Minh စက်မှုဇုန်, Me Linh ဒေသ, Hanoi မြို့မှာရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စက်ရုံမှာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ခေတ်မီသော နည်းပညာ အပလီကေးရှင်းဖြင့် ဒီစက်က ချောမွေ့ ငြိမ်သက်စွာ လည်ပတ်ပြီး ဝယ်ယူသူတွေကို ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ အင်နာဂျီကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Viet An ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေက အခြားပစ္စည်းတွေထက် ဈေးကြီးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
IVA2T 2ton Industrial Tube Ice Making Machine (100% New) offers an amazing capacity of energy saving.
IVA 2T ၂ တန် စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်)က အံ့သြဖို့ကောင်းတဲ့ အင်နာဂျီချွေတာနိုင်စွမ်းကို ပေးပါတယ်။
၂ နှစ်ပြီးသွားတဲ့ အခါမှာ စက်အဟောင်းရဲ့ ဈေးနှုန်း+ မီတာခ ၂ နှစ်က ၁၀၀% အသစ်စက်ရဲ့ ဈေးနှုန်း+ မီတာခ ၂ နှစ် တူညီနိုင်သလို မြင့်လည်း မြင့်နိုင်ပါတယ်။ စက်အဟောင်းမှာ ဆိုရင် လည်ပတ်နေမှုအတွင်း ပြသနာပေါ်ပေါက်လျှင် ပြန်ပြင်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ် မပါဝင်ပါဘူး။ ဒီ၂ နှစ်အတွင်းမှာ စက်အသစ်က တည်ငြိမ်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ ၂ နှစ်အတွင်းမှာ အပျက်အစီးမရှိနိုင်ပေမယ့် ၃ နှစ်မြောက်အထိ စက်အသစ်က ပိုမို ကောင်းကောင်း လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ အပေါ်က အချက်အလက်အရ စက်အသစ်နဲ့ အဟောင်း သင်ရွေးချယ်လို့ ရပါပြီ။
The product quality is strictly controlled according to ISO 9001-2015 international standard, distributed by Viet An at our branches in Hanoi, Ho Chi Minh, Hue, Da Nang, Buon Ma Thuot, and exported to the Asean countries. We commit to provide our customers with the best products at the most competitive prices.
ပစ္စည်းကွာလတီကို ISO 9001-2015 နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းနဲ့အညီ တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားပြီး Hanoi, Ho Chi Minh, Hue, Da Nang, Buon Ma Thuot တို့မှာ ရှိတဲ့ ရုံးခွဲများမှ ဖြန့်ချီပေးပြီး အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဝယ်ယူသူတွေကို အကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေကို ဈေးအသက်သာဆုံးနဲ့ ရောင်းချပေးနေကြောင်း အာမခံပါတယ်။
Free packaging system
The packaging system offers an amazingly quick and convenient operation. When buying the IVA0.4T 400Kg Industrial Tube Ice Making Machine (100% New), you will be givenapackaging system.
ထုတ်ပိုးမှုစနစ်က လျင်မြန်စွာ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ IVA 2T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်) ကို ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ထုတ်ပိုးမှုစနစ်လည်း ပေးဆောင်ပါတယ်။
If you still decide to choose an old compressor withoutaliquid and gas separation system, an old condenser, old pump and other components, go to https://locnuocvietan.vn/san-pham-viet-an/may-lam-da-vien/
တကယ်လို့ သင်က အရည်အငွေ့ ခွဲခြားပေးသော စနစ် မပါတဲ့ ဖိသိပ်စက်အဟောင်း၊ အရည်မှ အငွေ့သို့ ပြောင်းလဲပေးသောစက် အဟောင်း၊ ရေစုပ်စက်အဟောင်းနဲ့ အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေကို ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင် https://locnuocvietan.vn/san-pham-viet-an/may-lam-da-vien/ တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာလိုက်ပါ။
Operation principle of Viet An’s IVA2T 2ton Industrial Stainless Steel Ice-making machines isavery common question ofanumber of customers.
Viet An ရဲ့IVA 2T ၂ တန် စက်ရုံသုံး စတိန်းလက်စ်စတီးရေခဲထုတ်စက်၏ လည်ပတ်မှုစည်းမျဉ်းက ဝယ်ယူသူတွေ မေးနေကျမေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။
The fist thing you need to prepare isa3-phase 380V power source andaproper water source such as groundwater or well water. With Viet An’s ice-making machines, you will not need to worry too much when your water source has several parameters exceeding the acceptable level.
ပထမဆုံး သင်ပြင်ဆင်ရမှာက ၃ ဆင့် ၃၈၀ ဗို့ ပါဝါအရင်းအမြစ်နဲ့ မြေအောက်ရေ သို့မဟုတ် တွင်းရေလိုမျိုး ရေအရင်းအမြစ်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Viet An ရဲ့ ရေခဲထုတ်စက်တွေနဲ့ဆိုရင် သင်ရဲ့ ရေအရင်းအမြစ်မှာ လက်ခံထားတဲ့ အဆင့်ထက်ပိုနေတဲ့ ပါရာမီတာတွေ အမြောက်အမြား ရှိနေရင်တောင် အရမ်းစိုးရိမ်စရာ မလိုပါဘူး။
Viet An’s IVA2T 2ton Industrial Stainless Steel Ice-making machine can operate effectively inaclosed cycle with just one on/off button. All that you need to do is switch on the machine and wait for 40 minutes until you can get the finished product. The detailed operation process is as follows:
Viet An ရဲ့ IVA 2T ၂ တန် စက်ရုံသုံး စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်က ခလုတ်အဖွင့် အပိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ သီးသန့် စက်ဝိုင်းမှာ လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ပြုလုပ်ရမှာက စက်ကိုဖွင့်ပြီး ပြီးဆုံးသွားတဲ့ ပစ္စည်းမရခင် မိနစ် ၄၀ လောက် စောင့်ပေးရုံပါပဲ။ အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
After the filtration process, the water in the lower water reservoir will be pumped into the upper tank with the stainless steel pump. After that, it flows into the line where the cold gas freezes it. The ice becomes thicker through time. The excess water is kept inatank and continues to be pumped to the upper water supply tray for the freezing process.
ရေစစ်လုပ်ငန်း ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ အောက်က ရေလှောင်ကန်ထဲက ရေတွေကို အပေါ်တိုင်ကီထဲသို့ စတိန်းလက်စ်စတီး ရေစုပ်စက်နဲ့ စုပ်တင်ပါမယ်။ အဲ့ဒီ့နောက် ရေက အအေးငွေ့တွေက ခဲပေးမယ့် လိုင်းဆီကို စီးသွားပါမယ်။ အချိန်အလိုက် ရေခဲကလည်း ပိုပိုပြီး ထူလာမှာ ဖြစ်တယ်။ ရေအပိုကို တိုင်ကီထဲမှာ သိမ်းထားပြီး အပေါ်ဘက် ရေပေးပို့တဲ့ နေရာဆီကို ခဲဖို့အတွက် စုပ်တင်ပေးပါမယ်။
Once the ice-making process is completed (within 40-45 minutes), the hot gas is utilized to melt the thin layer covering the tube ice to make it drop.
ရေခဲပြုလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်း ပြီးဆုံးသွားပြီ ဆိုတာနဲ့( မိနစ် ၄၀ မှ ၄၅ မိနစ်အတွင်း) အပူငွေ့ကို ရေခဲတုံးပေါ်က အလွှာကို စွန့်ပစ်ဖို့ အရည်ပျော်အောင် လုပ်ရပါမယ်။
The dropped ice is then cut with the blade set (made from stainless steel) into the smaller tubes according to the ordered dimension. Then comes the freezing process. During the dissolution process, the water pump stops working.
ချလိုက်တဲ့ ရေခဲကို စတိန်းလက်စ်စတီးဓားနဲ့ မှာထားတဲ့ အတိုင်းအတာအတိုင်း အပိုင်းလေးတွေ ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါမယ်။ အဲ့ဒီနောက် ပြန်ခဲရပါမယ်။ ဒီအရည်ဖျော်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ရေစုပ်စက်က အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
A couple of considerations to keep in mind during installation of Viet An’s IVA2T 2ton Industrial Stainless Steel Ice-making machine
Viet An ရဲ့ IVA 2T စက်ရုံသုံး စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်ကို တပ်ဆင်တဲ့အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များ
With the application of American’s advanced technology, this machine enables an automatic, fast, and stable ice-making process, thereby remarkably saving energy, workforce, and operation costs and ensuring food hygiene and safety standards.
Below are essential things that the customers need to prepare to get the smoothest installation process:
အမေရိကန်ရဲ့ ခေတ်မီသော နည်းပညာကြောင့် ဒီစက်က လျင်မြန်ပြီး တည်ငြိမ်စွာနဲ့ အော်တိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်နာဂျီ၊ လုပ်အား၊ လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်တွေကို လျှော့ချနိုင်ပြီး အစားအသောက် လုံခြုံစိတ်ချရရေး စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ ညီပါတယ်။ အောက်တွင် ဝယ်ယူသူများအနေနဲ့ အချောမွေ့ဆုံး တပ်ဆင်နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်တာတွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
Self-supplied customer inlet water tank
ကိုယ်တိုင်ပေးပို့သော ရေလက်ကြား တိုင်ကီ
Three-phase power supply (380V)
၃ ဆင့် ပါဝါပေးပို့မှု(၃၈၀ ဗို့)
Qualified intake water
Regarding the factory area, proper area needs to be well-prepared for the installation of following machines:
စက်ရုံဧရိယာအတွက်ဆိုရင် အောက်က စက်တွေတပ်ဆင်ဖို့ သေချာပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။
Cold storage system (if any)
To buy our IVA2T 2ton Industrial Stainless Steel Ice-making machine (100% New), the customers can directly visit us at our branches in Hanoi, Da Nang, Buon Ma Thuot, Ho Chi Minh city or via our hotline: +84 839 31 31 31 for free consultation.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ IVA 2T စက်ရုံသုံး စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်)ကို ဝယ်ယူရန် Hanoi, Da Nang, Buon Ma Thuot, Ho Chi Minh မြို့တွေမှာ ရှိတဲ့ ရုံးခွဲတွေကို သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သလို +၈၄ ၈၃၉ ၃၁ ၃၁ ၃၁ ကို ဆက်သွယ်ပြီး အခမဲ့ တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
KL8 cold storage system
VAMĐ 7T Water filtration system
Hỏi đáp & đánh giá IVA2Tရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)